NH3 (ammonia) => ? | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
NH3 =? | Isu dheellitirka Kiimikada
Natiijooyinka 205 helay
2NH3 + H2Cr2O7 → 2 KOH + N2 + 2Cr (OH)3
ammonia potassium hydroxide nitrogen
(digo yaraa đậm đặc) (lng) (digo yara) (kh) (la soco)
(jacayl, daacadnimo) (xoog leh) (xoog leh) (la soco)
2 1 2 1 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2NH3 + H2Cr2O7 → 2 KOH + N2 + 2Cr (OH)3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NH3 (ammonia) ay kaga falceliso H2Cr2O7 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa KOH (potassium hydroxide) iyo N2 (nitrojiin) iyo Cr (OH) 3 ()?
NH3 waxay la falgashaa H2Cr2O7
Dhacdada ka dib NH3 (ammonia) waxay la falgashaa H2Cr2O7 ()
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Cr (OH) 3, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda H2Cr2O7, la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2NH3 + H2Cr2O7 → 2 KOH + N2 + 2Cr (OH)3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta H2Cr2O7 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2Cr2O7 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2Cr2O7 () falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee N2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh N2 (nitrogen) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Cr(OH)3 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cr(OH)3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cr (OH) 3 () badeecad ahaan?
AgNO3 + H2O + 3NH3 → NH4MAYA3 + (Ag (NH3)2) OH
amooniyam qalin biyaha ammonia amooniyam amooniyam
(rnn) (lng) (kh) (rnn) (rnn)
(trung) (xoog leh) (xoog leh)
1 1 3 1 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta AgNO3 + H2O + 3NH3 → NH4MAYA3 + (Ag (NH3)2) OH
Waa maxay xaalada falcelinta AgNO3 (nitrate Silver) oo la falgala H2O (biyaha) waxay la falgalaan NH3 (ammonia)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NH4NO3 (ammonium nitrate) iyo (Ag(NH3)2)OH ()?
Nitrate Silver ayaa la falgala ammonia
Dhacdada ka dib AgNO3 (Nitrate Silver) waxay la falgashaa H2O (biyaha) waxay la falgalaan NH3 (ammonia)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga (Ag (NH3) 2) OH, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada AgNO3 + H2O + 3NH3 → NH4MAYA3 + (Ag (NH3)2) OH
Su'aalaha la xidhiidha alaabta (Ag(NH3)2)OH ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee (Ag(NH3)2)OH (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (Ag(NH3)2)OH () alaab ahaan?
H2O + NaCl + NH3 → NaHCO3 + NH4Cl
biyaha chloride sodium ammonia bicarbonate sodium chloride ammonium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2O + NaCl + NH3 → NaHCO3 + NH4Cl
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) ee ay la falgalaan NaCl (sodium chloride) waxay la falgalaan NH3 (ammonia)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NaHCO3 (sodium bicarbonate) iyo NH4Cl (ammonium chloride)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan NaCl (sodium chloride) waxay la falgashaa NH3 (ammonia)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2O + NaCl + NH3 → NaHCO3 + NH4Cl
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaCl (sodium chloride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaCl (sodium chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaCl (sodium chloride) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta NaHCO3 (sodium bicarbonate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaHCO3 (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaHCO3 (sodium bicarbonate) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH4Cl (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH4Cl (ammonium chloride) alaab ahaan?
4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 → 4 Ag + 3NH4MAYA3 + 3CH3COONH4
amooniyam qalin acetaldehyde ammonia lacag amooniyam amooniyam
(rnn) (lng) (kh) (kt) (kh) (rnn)
(trung) (jacayl, daacadnimo) (trung) (xoog leh)
4 3 5 4 3 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 → 4Ag + 3NH4MAYA3 + 3CH3COONH4
Waa maxay xaaladda falcelinta AgNO3 (Nitrate Silver) oo la falgala CH3CHO (acetaldehyde) waxay la falgashaa NH3 (ammonia)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Ag (silver) iyo NH4NO3 (ammonium nitrate) iyo CH3COONH4 ()?
CH3CHO waxay la falgashaa AgNO3 / NH3
Dhacdada ka dib AgNO3 (Nitrate Silver) waxay la falgashaa CH3CHO (acetaldehyde) waxay la falgashaa NH3 (ammonia)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 → 4Ag + 3NH4MAYA3 + 3CH3COONH4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CH3CHO (acetaldehyde)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3CHO (acetaldehyde)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3CHO (acetaldehyde) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta CH3COONH4 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COONH4 (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COONH4 () badeecad ahaan?
4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 → (NS4)2CO3 + 4 Ag + 4NH4MAYA3
amooniyam qalin biyaha ammonia lacag amooniyam amooniyam
(rnn) (lng) (digo yara) (kh) (rnn) (kt) (kh)
(xoog leh) (jacayl, daacadnimo) (xoog leh)
4 2 1 6 1 4 4 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 → (NH4)2CO3 + 4 Ag + 4NH4MAYA3
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa (NH4)2CO3 () iyo Ag (silver) iyo NH4NO3 (ammonium nitrate)?
HCHO waxay la falgashaa AgNO3 / NH3
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 → (NH4)2CO3 + 4 Ag + 4NH4MAYA3
Su'aalaha la xidhiidha alaabta (NH4)2CO3 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee (NH4)2CO3 (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (NH4)2CO3 () alaab ahaan?